Tag: waqtiga » Martech Zone
Waqtiga Akhrinta: 7 daqiiqo La shaqaynta shirkadaha tiknoolajiyada, waxaan layaabay inta badan ee martigelinaya barnaamijyadooda ku jira Adeegyada Websaydhka Amazon (AWS). Netflix, Reddit, AOL, iyo Pinterest hadda waxay ku shaqeeyaan adeegyada Amazon. Xitaa GoDaddy waxay u guureysaa inta badan kaabayaasheeda halkaas. Furaha caanku waa isku-darka helitaanka sare iyo qiimaha hooseeya. Tusaale ahaan, Amazon S3, waxaa loogu talagalay inay gaarsiiso 99.999999999% helitaanka, iyadoo u adeegaysa trillions of walxaha adduunka oo dhan. Amazon waxay caan ku tahay qiimaheeda gardarrada ah
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Waxaan jecel nahay waxyaabaha fudud ee fudud sida qofka xiga, laakiin waxaan aaminsanahay inay jirto fikrad khaldan oo weyn oo ka jirta warshadeenna. Fikradda ah in feejignaantu ay hoos u dhacayso waxay u baahan tahay xoogaa duruuf ah oo lagu soo koobo. Marka hore, gabi ahaanba waan diidanahay in dadku ay tamar yar ku bixinayaan waxbarida naftooda ku saabsan go'aankooda soo socda ee soo socda. Macaamiisha iyo ganacsiyada waqti badan ku qaatay ka hor inta aan cilmi baarista la samayn wali cilmi baaris badan ayey wadaan. Waxaan ku orday warbixinnada falanqaynta
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Ma hubo inaan u wici lahaa qaabkan sawir-gacmeedka Sida loo Abuuro Qoraallo Dhameystiran; si kastaba ha noqotee, waxay leedahay caddayn weyn oo ku saabsan waxa ku dhaqanka ugu fiican ee ka shaqeeya cusbooneysiinta bartaada, fiidiyowga iyo xaaladaha bulshada ee khadka tooska ah. Tani waa soocelinta afraad ee boggeeda caanka ah ee caanka ah - waxayna ku dareysaa baloog garaynta iyo fiidiyowga. Adeegsiga sawirada, wicitaanka-ficilka, dhiirrigelinta bulshada iyo hashtagsku waa talo weyn oo badiyaa waa la iska indhatiraa iyadoo suuqleyda ay ka shaqeeyaan kaliya inay baahiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Aniga
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Dhammaan qandaraasyada aan la leenahay macaamiisheennu waa hawlgal bille ah. Marar aad u yar baynu ku daba jirnaa mashruuc go'an oo waligoodna kama ballanqaadayno waqtiga. Taasi waxay cabsi u noqon kartaa dadka qaar laakiin arinta ayaa ah in ujeedku uusan noqon taariikhda la sii daayo, waa inay noqotaa natiijooyinka ganacsiga. Shaqadeenu waa inaan helno macaamiisheena natiijooyinka ganacsiga, ma ahan inaan qaadno dariiqyo si aan u sameysano taariikhaha bilaabista Maaddaama Healthcare.gov ay wax baranayso, taasi waa waddo
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Suuqgeynta xilligan casriga ah waa wax qosol badan; halka ololeyaasha suuqgeynta ee ku saleysan websaydhku ay aad uga sahlan yihiin in lala socdo ololeyaasha dhaqanka, waxaa jira macluumaad aad u badan oo la heli karo oo dadka ku curyaami kara iyagoo raadinaya xog dheeri ah iyo 100% macluumaad sax ah. Qaar ka mid ah, qadarka waqtiga ee la kaydiyay iyadoo awood u leh inay si dhakhso leh u ogaato tirada dadka arkay xayeysiintooda internetka inta lagu jiro bil la diidey waqtiga